Oniversite - Wikipedia
Ny oniversite dia fianarana avo lenta, ny tanjony dia manamboatra fahaizana, mitahiry ary mampita azy amin'ny alalan'ny karoka. Any Etazonia, i Peirce, folôzôfy amerikana, dia nilaza tamin'ny 1891, fa ny oniversite dia « fikambanana olona omen'ny firenena tombon-tsoa, mba hahafahan'ny vahoaka hanam-pahaizana ary mba hamaha ny olana teôrika misy mandavan'ny fivoaran'ny Haifomba ».
Voafetra amin'ny olona manana ny diplôma avy ao amin'ny fianarana secondaire ny fidirana any amin'ny oniversite. Amin'izao fotoana izao dia mihabetsaka ny isan'ny mpianatra mianatra amin'ny oniversite, ary nihaniakatra hatrany ny isany hatran'ny taonjato faha 20, indrindra hatry ny ady lehibe faharoa. Amin'izao fotoana izao, rehefa mandeha tsara ny oniversite, dia lazaina fa manana vokatsoa ara-toe-karena. Noho izany, ny firenena eoropeana, manohana ny fifaninanana iraisam-pirenena, dia lasa manao refôrman'ny oniversiteny.
1 Tantaran'ny oniversite
1.2 Taonjato faha 11 : Fahaterahan'ny oniversite eoropeana
1.3 Taonjato faha 15-18
1.4 Ny oniversite tamin'ny taonjato faha 19
1.5 Ankehitriny : ny oniversite moderna
Tantaran'ny oniversite[hanova | hanova ny fango]
Aloha ny miresaka momban'ny tantaran'ny oniversite, tokony lazaina, fa ny teny « oniversite » dia teny avy amin'ny haifomba eoropeana namorona azy hatry ny taonjato faha 11. Nialohan'ny oniversite eoropeana arivo taona latsaka ny akademia Grika ohatra ny akademian'i Platon na fianarana avo any Sina ohatra ny oniversien'i Nanjing, any India ohatra ny oniversien'i Nalanda, any Iran amin'ny akademian'i Gundishapur na any Japana amin'ny Ashikaga gakkō, .
Taonjato faha 11 : Fahaterahan'ny oniversite eoropeana[hanova | hanova ny fango]
Kilasy anaty oniversite tamin'ny 1350
Ny Eoropa, tany Bologne (Italia) ny oniversite eoropeana voalohany indrindra. Tontalin'ny fahaizana araky lalàna tamin'izany fotoana izany fotsiny no ampianariny. Tamin'ny 1150, ny mpianatra avy amina fikambanana maro samihafa ny ila ankavian'i Paris dia nakambana ao amin'ny Oniversiten'i Paris (Université de Paris). Ny mpanatra anglisy noroahana tao Paris tamin'ny 1166 dia namorona ny Oniversiten'i Oxford. Namorona ny fampianarana medecine ny Papa Ray Masina tany Montpellier. Tamin'ny taonjato faha 13, ny taranja ampianarina dia atao manodidon'ny « faculté efatra » : taozavatra, siansa, lalàna sy teôlôjia. Tamin'izany fotoana izany ny onivesite dia mandray anjara amin'ny fampivoarana ny fahaizana, mikasika akaiky ny eglizy katôlika
Anatin'izany tontolo izany, tsy mahagaga raha mahazo ny anjaran'ny liona ny teôlôjia sy ny zo fahamasinana. Tonga avy any lavitra ny mpianatra mba hianatra amin'ny oniversite. Tsy ianarana ny « taozavatra mekanika » sy ny « siansa ny vola », tra-boin'ny tsi-fitiavana ny asa tanana sy ny tombo ara-bola asehon'ny hova sy ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Mifototra amin'ny lahatsoratra lazaina hoe "de réference". Ao amin'ny famakiana (lectio) sy fandinihana (disputatio) ny pedagôjia, karazana adihevitra mifanohitra mifototra amin'ny ankapobeny eo amin'ny fizohian-kevitra. Manana fitehirizam-boky haingana ny oniversite mba hameno ny havitsy ny boky azo vakiana.
Taonjato faha 15-18[hanova | hanova ny fango]
Ny oniversite tamin'ny taonjato faha 19[hanova | hanova ny fango]
Ankehitriny : ny oniversite moderna[hanova | hanova ny fango]
Oniversiten'Antananarivo (1961) · Oniversite Mahajanga (1977) · Oniversiten'Antsiranana (1976) · Oniversite Fianarantsoa (1992) · Oniversite Toamasina (1977) · Oniversite Toliara(1971).
((en)) 2008 Academic Ranking of World Archived Desambra 21, 2008 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Oniversite&oldid=1023394"
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 09:56 ity pejy ity.